Ka hortaga darbi ku kaadiska San Francisco - BBC Somali
Ka hortaga darbi ku kaadiska San Francisco
Waa digniin: Haddii aad ku kaadiso darbiyada magaalada San Francisco waxa dhici karta in kaadidaada kugu soo noqoto Hay'adda howlaha guud ee magaalada, ayaa sheegtay in ay tijaabinayso rinji soo celinaya kaadida oo la mariyo meelaha ay caanka ku ah in dadku ku kaadiyaan.
Qofkii go'aansada in uu ku kaadiyo darbiyada rinjigaasi la mariyay, ayaa waxaa dib ugu soo laabanaya kaadida, sida ay sheegtay afhayeenka dowladda hoose.
Agaasimaha waaxdaas, ayaa fikirkan ka heshay mar ay aqrisay rinjigan, oo loo isticmaalay degmo lagu caweeyo oo ku taalla dalka Jarmalka.
Bulashada ku dhaqan IG St Pauli ee magaalada Hamburg, ayaa bilaabay rinjigaas in ay mariyaan darbiyada, si ay wax uga qabtaan dhibaato ay geysteen 20 milyan oo dalxiisayaal ah, oo degmadaasi soo booqda sanad walba.
Bishii March, waxay u sheegeen barnaamijka BBC Newsbeat, in rinjigaasi uu u muuqdo mid shaqeynaya, ugu dambayntiina uu wax ka qabtay dhibaatadii taagneyd.
Rinijiga, oo la yiraahdaa Ultra-Ever Dry, ayaa abuura hawo ku samaysanta dusha sare ee darbiga "waxay tuuraysaa dareere kasta ee ku dhaca," sida ay leeyihiin kuwa sameeyay.